Hadii Keenta Dab Qabsado, Ayaxu Ma Helo Waqti uu isku Macsalaameeyo. W/Q: Asadnaa Suudi – Radio Daljir
Noofember 13, 2018 7:36 g 0
Nin darwiish ah oo wax badan ka qayb qaatay halgankii hubaysnaa ee gobanimo-doonka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulle Xassan hogaaminayey ayaa markii la jabay oo diyaarado lagu garaacey ciidamada daraawiishta, Taleex na laga baxay, wuxuu ka mid noqday dadkii dib usoo laabtey. maalin ayuu wuxuu fuulay mid ka mid ah buuraladayda kuyaala dhulka Nugaasha. sidaas ayuu wuxuu isha ula raacay dhulkii Nugaaleed ee sannadaha badan saldhiga u ahaa taliskii uu ka midka ahaa. markaasaa wuxuu maskaxda ka gocday xaaladdii la galay sayidka ka dib oo Ingiriis iyo taageerayaashiisii dhulka ku hashlaynayaan iyo raggii daraawiish ka haray oo maxaabiis mooyee nin meel ka muuqda uusan ku harin.
Ninkii darwiishka ahaa intuu isla hadlay oo dhaqaaqay ayuu wuxuu yidhi “bello ku degtay Nugaal, alla Maxaa waa ka-beryey” taasoo uu ula jeeday wixii duunyo iyo halgan la soo maray, in uu goob joog ka noqdo marxalad ka duwan tii birisamaadkii uu joogey.
Hadaba dagaalkii qaboobaaa (cold-water) ee dawladda dhexe iyo golaha iskaashiga maamul goboleedada dalka dhexmarayey, wuxuu ku soo afmeermey sidii bil sodonkeed magaalada (Baydhabo) kadib markii laga takhalusay madaxweynihii golaha (GIDG) Shariif Xassan. saaxiibadiis oo daawanaya ayuu waayey wax fursad gorgortan siyaasadeed ah (no option) aan ka aheyn in uu kaduulo Baydhobo isagoo aan loo xalfadeyn, wuxuu galaaftey saddex magac ama jago “Madaxweyniihii Konfur-Galbeed, Gudomiyihii iyo afhayeenkii golaha iskaashiga (GIDG). Shariif Xassan oo ahaa gudoomiyihii ugu dambeeyey ee golaha iskaashiga lama yaqaano qaabka ay isu macsalaameeyeen xubnaha golahaasi ka hadhey, balse waxaa la hubaa in uusan degi doonin midkoodna garoowe ama kismaayo.
Dhawaan heshiisyadii iskaashiga gobolka ka hanaqaadey (Joint Declaration on Friendship) iyo isdhexgalka dhaqaalaha gobalka iyo kaalinta hoggaaminta Siyaasadda cusub ee geeska Africa gaar ahaan wadamada Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea oo ay Dowlada soomaaliya hormuudka ka noqotey ayaa ah siyaasad cajiib ah oo dowlad soomaaliyeed ku dhaqaaqdo 18 kii sano ee ugu dambeeyey,
1: waxaa meesha kabaxdey isku dhererintii iyo jaajaamintii maamul goboleeyada ku hayeen dowlada dhexe.
2: waxaa ceel sal dheer ku dhacey ama lagu riday rajadii maamulka Somaliland ka qabay in dowladaha gobalka si gaar ah ula macaamisho ama ictiraaf ka hesho.
3: Dowlada dhexe oo adeegsatey awoodaha sharciga dastuurka ferederaalku siiyey, kadib markii ay iska hor leexisey maamul gobaleeyadii lig-liga heystey.
Hadana wali lama diidi karo inuu jiro gaabis Amni iyo horusocod, xukumada Nabad iyo Nolol shaqada balaaran ee hortaala iyo wakhtiga u hadhey isuma dhigmo. koror dhaqaale, maxaabiis dalka dib loogu soo cesho, wada shaqaynta wanaagsan ee golaha fulinta, dib ugu soo-celinta hawada soomaaliya, shaqada garoonka oo laga dhigay maalin iyo habeen, bixinta mushaarka joogtada ah ee shaqaalaha rayidka iyo ciidamada. waxaas oo wanaag ah waa shaqo laga soo dhalaaley, dhamaan arimahaasi waxay soo hoos tagayaan (dawlad wanaag) wayna mudan tahay in lagu bogaadiyo dawlada , balse wali waxaan muuqda oo gaabis badan ka jiraa dhowr qodob oo ah milestone ama halbeeg u ah wax qabadka dawlada sida; Qabya-Tirka Dastuurka, Baahinta Amniga iyo Doorasho Qof iyo Cod ah.
Waxaase xusid mudan si kasta ay gaabis iyo dhaliilo ay uleeyihiin hogaanka madaxda dalku. hadana mar walba waxaa ka khatar badan dowlad isheysata, bulsho kala irdhoowdey iyo danta dalka oo qof walba meel ula dhaqaaqdo.
Ugu dambeytii, waxaa hubaal ah in cashar laga bartey wixii lasoo marey, la helo dowlad gobaleeyado ku xidhan una hogaansan awaamiirta awoodaha sharciga federaalka uu dawlada dhexe siiyey, hadi aan la helin taasna waxaan shaki ku jirin in ay lumayso kala dambeynta dowladnimo, karaamada iyo sharafka ummada soomaaliyeed na ay sii wiiq-meyso. dalkuna kala dhantaalmayo, waayo habka ay hada u dhaqmayaan maamul goboleedyadu waxuu u muuqdaa (Confederation System) iyo awood maroorsi aan cago adag ku taagneyn. waxeyna baal mareen nidaamka federaalkii lagu heshiiyey.
Falaanqeeye siyaasadda Soomaaliya